Waxa ay noqon kartaa quruxsan niyadjab marka aad furto aad iPad, helitaanka boqolaal emails la aqrin in Mail app. Dhab ahaantii, wax badan oo ka mid ah waa waxtar lahayn. Si aad u nadiif ah aad mail, ka dibna aad rabto in laga yaabo inay ogaadaan sidii ay si joogto ah u tirtirto emails ka iPad. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud (ma aha oo kaliya emails laga saaray app Mail, laakiin sidoo kale ka server)
Tallaabada 1. Tubada Mail app on your iPad. Mailkooda Open iyo tuubada "Edit". Ugu bidix hoose, tuubada 'Mark All'> 'Mark Sida Read'.
Tallaabada 2. Tubada Mail> mailkooda furan> tuubada Edit> Hubi fariin. Markaas ka hooseysa, waxaad ka arki kartaa fursad u dhaqaaq 'waa karti.
Tallaabada 3. Marka hore, jaraa'id iyo hay badhanka dhaqaaq 'oo isticmaal gacanta kale si uncheck fariinta aad ka hubisay in talaabo 2. farahaaga dhaqaaq off screen iPad.
Tallaabada 4. In uu furmo suuqa cusub, sawirnaa qashinka. Tani waa meesha ay mucjiso ka dhacdo. Waxaad arki kartaa in dhammaan emails lagu dhaqaaqay qashinka. Waxaa jiri doona suuqa kala maran, kuu sheegaysa jiro mail ma at dhan. Oo halkaasaannu ka, waxaad u tagi kartaa folder qashinka iyo 'Edit' ka jaftaa ka dibna tubbada "Delete All 'salka hoose in ay tirtirto oo dhan emails.
Fiiro gaar ah: ka dib codsanaya ku xusan habka kor ku xusan in ay si joogto ah u tirtirto mail on iPad, haddii aad isla markiiba ku soo laabto app Mail, aad arki karto tirada mail wali waa ay jiraan. Ha welwelin. Taasi oo kaliya Cache. Sug labaad dhawr in aynu mail ugu ceshadaan laftiisa si toos ah.
Bixin: Sidee ayaan u tirtirto emails tirtiray ka 'baadho' feature on my iPad?
Si aad u noqoto qof daacad ah, ka dib marka aad isticmaasho habka kor ku xusan in ay si joogto ah u tirtirto emails ka iPad (iPad Pro, iPad mini 4 taageeray), marka raadinta ee 'diirada', waxaad ka heli doontaa inay weli tahay halkan. Taasi waa sababtoo ah inkastoo aad tirtiray iyaga on your iPad, ay weli ka jiraan meel aad iPad laakiin la arki karin. Haddii aad dhabtii doonaysid in aynu iyaga weligood tago, markaas waa inaad isku daydaa Wondershare SafeEraser 's' Delete All Data 'si ay u masixi aad iPad gabi ahaanba. Marka aan sidaa yeelno, emails Waa in weligoodba la saari doonaa. Laakiin is ogow, muujinta ah ayaa sidoo kale ka saaraysaa macluumaad kale. Hadda sameeysa ay si adag uga shaqaynaysaa si ay u suurto gal ah in aynu dadka isticmaala si joogto ah u tirtirto mails on iPad, rajeynaya waxaa laga heli doonaa dhakhsaha badan.
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah Delete Emails ka iPad